Isikhokelo saBasaqalayo kwii-Aquariums II | Ngeentlanzi
Njengoko besitshilo ngaphambilana, wonke umntu ngaxa lithile ebomini bethu wayeqala kwenye into. Ngamanye amaxesha senza amawaka eempazamo ngaphambi kokuba siqonde ukuba endaweni yokwenza into elungileyo, ngokuchaseneyo, besiyenza ngendlela engalunganga.
Injongo yale nqaku kukunceda umntu oqalayo kwimixholo yeelwandle ukuze wazi kwaye ufunde malunga nento ekufuneka siyithathele ingqalelo xa sicinga ngokuba netanki leentlanzi ekhaya.
Uninzi lwabantu xa luthatha isigqibo sokuba ne-aquarium, bayenzela ukukhuthaza ukucinga ukuba ukugcina itanki leentlanzi kunye neentlanzi ezincinci zidada apho kulula, kodwa khumbula ukuba akukho lula kangako, ubomi beentlanzi kunye nezidalwa Izinto eziphilayo onazo ngaphakathi kwetanki lakho, ke kubalulekile ukuba ungazithathi ngokulula nangokungakhathali.
Izolo sibone enye yeefayile ze- iintlobo ze-aquarium ezikhoyoNamhlanje siza kuthetha ngohlobo lwesibini, oluyi-aquarium enamanzi afudumeleyo.
Olu hlobo lwe-aquarium luqhelekile ngokwesiko kunangaphambili, iintlobo ezihlala apho zifuna ukuba ubushushu bamanzi bube phakathi kwama-24 nama-28 degrees ngokukaCelsius, ngenxa yoko siya kufuna inkqubo yokufudumeza. Nangona abantu abaninzi xa beqala ngale ndawo ye-aquarium intlanzi yegolide nabanye abavela kumanzi afudumeleyo, mandikuxelele ukuba yimpazamo. Nangona le ntlanzi inokuhlala kwezi ndidi zamanzi, izakubonisa iingxaki zempilo ngexesha elifutshane. Amanzi akwariyam akwiitropiki aya kukuvumela ukuba ube neentlobo ezahlukeneyo, ukuba nje ziyahambelana, zombini iintlanzi kunye nezityalo, ke iya kuba yeyona aquarium ibalulekileyo emehlweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » I-Aquarium yetropiki » Isikhokelo saBaqalayo kwii-Aquariums II
Luhlobo luni lwentlanzi endingaqala ngalo, uxolo?
Uncedo oluhle kakhulu lokuba ubonelele ngolwazi lwakho